Nepal Samaya | कोरोनाका बिरामीबाट अस्पताल भरिँदै, अधिकांशलाई अक्सिजनको आवश्यकता नपर्ने
कोरोनाका बिरामीबाट अस्पताल भरिँदै, अधिकांशलाई अक्सिजनको आवश्यकता नपर्ने
कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरका क्रममा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीहरु। फाइल तस्बिर।
काठमाडौं- अहिले देखिएको कोरोना भाइरस संक्रमणले धेरै बिरामीलाई अक्सिजनको आवश्यकता नपर्ने चिकित्सकले जनाएको छ।
अस्पतालमा सङ्क्रमितको संख्या बढी पनि जटिल खालका बिरामी नआएको चिकित्सकले बताएका छन्।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. मनिषा रावलले अस्पतालमा भर्ना भएकामध्ये धेरै बिरामीलाई अक्सिजन आवश्यक नभएको बताए। 'अहिले अस्पतालमा उपचार गर्न आएका सङ्क्रमित बिरामीलाई अक्सिजनको आवश्यकता परेको छैन,' उनले भने, '६० प्रतिशत बिरामीलाई अक्सिजन आवश्यकता परेको छैन।' सङ्क्रमितलाई अक्सिजन नचाहिए पनि अक्सिजन प्लान्ट र तरल अक्सिजन प्लाण्ट अस्पतालले तयारी अवस्थामा राखिएको छ।
उनका अनुसार अस्पतालमा भर्ना भएका १२ मध्ये तीन जनालाई सघन उपचार कक्ष (आईसीयू)मा अक्सिजन दिई उपचार गरिएको छ। नौ जना हाई डिपडेन्सी कक्ष (एचडीयु)मा उपचार भइरहेको छ। उहाँका अनुसार अस्पतालमा भर्ना भएको अधिकांश बिरामी घाँटीमा अप्ठेरो बनाउने, नाकबाट पानी बग्ने, शरीर दुख्ने, शरीर तातो हुने, रुघा लाग्नेजस्ता समस्या देखिएका छन्।
यस्तै अहिले ओमिक्रोन भेरियन्टले मानिसको माथिल्लो श्वासप्रश्वास नलिमा सङ्क्रमण गराई श्वासप्रश्‍वास गर्नमा समस्या गराउने गर्दछ। यसअघिका डेल्टा भेरियन्टले तल्लो श्वासप्रश्‍वास नलि वा फोक्सामा संक्रमण गराउने गर्दथ्यो।
टेकु अस्पतालमा हिजो पुस २९ गते १५ जना बिरामी आएकामध्ये १० जनालाई कोभिड–१९ सङ्क्रमण भएको थियो। अस्पतालमा १०० शय्यासहित २४ आईसीयू रहेको छ। अस्पतालका निर्देशक डा. रावलले सङ्क्रमित बढिरहेकाले अबको दुई हप्ता चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। 'ओमिक्रोन भेरियन्टले कस्तो रुप लिन्छ। त्यसैको आधारमा अवको दुई हप्ता चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ,' उनले भने।
यसैगरी बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी बल अस्पतालमा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेका छन्। अहिले अस्पतालमा ५५ सङ्क्रमितको उपचार भइरहेको छ।
अस्पतालका डा प्रविन नेपालले पनि अहिले भर्ना भएका धेरै बिरामीलाई अक्सिजन नचाहिएको बताए। 'दोस्रो लहरको जस्ता अहिले देखिएका सङ्क्रमितलाई अक्सिजन चाहिएको छैन,' उनले भने, 'भर्ना भएका १५ प्रतिशत बिरामीलाई मात्र अक्सिजन दिएर उपचार गरिरहेका छौँ।'
अहिलेका सङ्क्रमितलाई घाँटी दुख्‍ने, ज्वरो आउनेजस्ता समस्या देखिएको उनको भनाइ छ। यस्तै कोभिड–१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल (वीर अस्पताल)मा विगत २४ घण्टामा १४ जना बिरामी भर्ना भएका छन्।
अस्पतालका प्रमुख डा. भूपेन्द्र वस्नेतले सङ्क्रमण बढेसँगै सङ्क्रमित पनि भर्ना हुन आउने बढेको बताए। उनका अनुसार अहिले ५२ बिरामी अस्पतालमा उपचाररत छन्। तीमध्ये नौ जना आइसियुमा उपचार भइरहेको छ।
प्रकाशित: January 14, 2022 | 21:50:00 काठमाडौं, शुक्रबार, पुष ३०, २०७८